6 arrin oo dadka taajiriinta ah ay sameeyaan balse faqiiriinta aysan sameynin - Muraayad
Home Nolosha 6 arrin oo dadka taajiriinta ah ay sameeyaan balse faqiiriinta aysan...
6 arrin oo dadka taajiriinta ah ay sameeyaan balse faqiiriinta aysan sameynin
Ma waxaad sameysaa ficillada taajiriinta mise kuwa faqiiriinta?
6 arrimood oo ay ku kala duwan yihiin Taajirka iyo Faqiirka | Credit: Getty Images
Waxaa jira farqiyo badan oo u dhaxeeya dadka maal qabeenka ah iyo kuwa saboolka ah, dhaqamadooduna gabi ahaanba way kala duwan yihiin.
Halkan waxaan kusoo gudbineynaa ilaa waxyaabood oo taajiriinta iyo faqiiriinta ay siyaabo kala duwan u sameeyaan.
1- Buug iyo telefishin
Dadka faqiiriinta ah inta badan marka ay firaaqada hayaan waxay daawadaan telefishinka. Laakiin marka la barbar dhigo dadka taajiriinta ah, intooda badan waqtogooda firaaqada ah waxay akhristaan buugaag.
Inkastoo labada arrinta ay ku imaadaan dookh, oo dadka ay dabeecad u leeyihiin akhriska kuwana daawashada jecel yihiin, haddana inta badan waxaa la ammaanaa akhriska oo faa’iidooyin badan lagu sheegay.
2- Qaadashada lacagta
Dadka faqiirka ah waxay u badan yihiin kuwo shaqaale ah ama meelo kale ka suga biil loo soo diro ama shaxaad ay qof ka qaataan. Helitaanka lacagtaas dhankooda waa mid ku xiran waqti, inta badanna waxay sugaan dhammaadka bisha.
Laakiin dadka taajiriinta ah waxay lacagta ku qaataan natiijo kasoo baxday ganacsigooda ama mashruuc ay fuliyeen.
Sidoo kale mar walba inta ay la egtahay lacagtooda waxay ku xiran tahay waxa ay sameeyeen muggiisa.
3- Guul darrada
Sida lagu ogaaday daraasado badan, dadka saboolka ah waxay guul darrooyinkooda iyo nasiib xumada ku dhacda ku eedeeyaan dad kale.
Hase ahaatee dada maal qabeennada ah ayaa sidaas ka duwan oo mar walba oo ay wax ka hallaabaan iyaga ayaa mas’uuliyadda qaata, waxayna durbadiiba xoogga saaraan sidii ay xal u heli lahaayeen.
4- Lacag dhigayo iyo maalgalin
Dadka faqiirka ah mar walba waxay ka fikiraan sidii ay u aruursan lahaayeen lacag, taasoo badanaa aan u suurtagalin.
Laakiin qofka hantida heysta waxa ugu horreeya ee uu ka fikiro waa inuu lacag ku maalgaliyo mashruuc.
Dabcan marka uu maalgashigaas miro dhalo ayuu kharash galayaa koontadiisa bangiga.
Haddii aadan ahayn taajir isku day in lacagta yar ee dhigaalka kuu noqotay aad ku maalgashato barnaamij aad ku faa’iideysid.
5- Waxa laga aaminsan yahay lacagta
Dadka faqiiriinta ah waxay aaminsan yihiin in lacagtu ay tahay waxa sababa dhibaatooyinka, iyagoo tusaale ka dhigta in qof walba oo lacag heysta uu heli karo wixii uu doono xitaa hadduu yahay xaq uu qof kale leeyahay.
Bale fikirkaas mid ka duwan ayey qabaan hantiileyaasha, waxayna rumeysan yihiin in mar walba dilalka, dhaca, kufsiga iyo dambiyada ay ku kooban yihiin meelaha ay daggan yihiin dadka saboolka ah.
6- Sida heer sare lagu gaaro
Inta badan dadka gacantooda aysan waxba ku jirin waxay aaminsan yihiin in sida kaliya ee heer sare looga gaaro dhanka dhaqaalaha ay tahay qofka oo ku guuleysta baqtiyaa nasiib. Tusaale ahaan in aad heshid lacag xad dhaaf ah oo ay shirkad ama dowlad u bixineysay si nasiib ah.
Ama in aad heshid kaararka dhoofitaanka ee lagu aado dibadda.
Dadka taajiriinta ah sidaas uma fikiraan. Waxay aaminsan yihiin in sida kaliya ee dhaqaale lagu sameyn karo ay tahay inuu qofka dhaqdhaqaaq sameeyo oo uu ficil shaqo fuliyo.
Previous articleSoomaalida iyo bixinta naanaysta xun – Adiga naaneystaada maxay tahay?
Next article7 dhacdo oo muran dhaliyay oo ku saabsanaa jilayaashii 1990-meeyadii